Kan Tun Thit – Irrawaddy | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Thee Lay Thee will go home? Pann Thee & Kyw Thee Answer
Cartoon Zaw Hmine (Oakland) – Burma, the side dish of China →
Kan Tun Thit – Irrawaddy
ကိုယ့်အစ်မတစ်ယောက်ပို့လိုက်သည့် ပါဆယ်လေးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ မဂ္ဂဇင်းလေးတစ်အုပ်၊ ဆည်းဆာရောင်စုံဟပ်နေသည့် မြစ်တစ်စင်းပုံနှင့်မျက်နှာဖုံးလေး၊ နောက်ကြောဖုံးမှာတော့“ထလော့မြစ်မင်းဧရာ”တဲ့။ ဆရာဒဂုန်တာယာ၏ကဗျာလေးက နေရာယူလျှက်၊ ကဗျာကိုတိုးတိုးညည်းမိရာအဆုံးမှာတော့ ….
ကိုယ့်ညာဘက်ရင်အုံသည် ဒိတ်ဒိတ်နှင့်တိုးလာတော့သည်၊ လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးများနှင့် တငြိမ့်ငြိမ့်စီးနေသောဧရာဝတီသည် ကိုယ့်ရှေ့ သို့ရောက်လာတော့သည်။
“ဗွမ်း” ကနဲခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ ကိုယ့်တို့ညီအစ်ကိုတတွေ ကူးကြခတ်ကြနှင့် သောင်စပ်မှာ၊ သောင်ထွန်း၍ ကမ်းဆိပ်သာချိန် ခုလိုတပေါင်း မှာ ရွာသားတို့ နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် ရေချိုးဆင်းကြမြဲ။ အဒေါ်တွေ အစ်မတွေ နှမတွေကလဲ အဝတ်လျှော်ကြ ခေါင်းလျှော်ကြနှင့် မြစ်ရိုးသည် နိုးထလျှက်။
ရွာ့ခေါင်းရင်းမလှမ်းမကမ်းမှ ကွေ့၍စီးဆင်းသွားသော မြစ်မင်းဧရာဝတီ၊ ဥတုသုံးပါးလုံး အလှမဆိတ်သည့်မြစ်။ ဆောင်းရာသီနှင်းမှုံကြား တွင်ဖြစ်စေ၊ မုသ်သုံဦးလှိုင်းမြူးချိန်မှာဖြစ်စေ၊ လှေမဆိတ် လူမတိတ်နှင့် လှမြဲလှလျှက်သာ။
ဝါဆိုဝါခေါင် ရေတွေဖောင်သည့်အခါတွင်တော့ ရွာဦးရွှေဒါလီစေတီနံဘေး ချောင်းကလေးမှ မြစ်ရေတို့စီးဝင်ကာ ကိုယ်တို့ရွာကလေးရေတွေဖွေးတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် နွားစာကျင်းများက သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်လှည့်လည်စရာ လှေငယ်လေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။
ရေဝင်ကြာလျှင်တော့ ကျွဲတွေ နွားတွေကို ရေလွတ်ရာကုန်းတွင်းပိုင်းဆီ ပို့ကြရမြဲ။ ကုန်းဆယ်သူဆယ်၊ ကန်သင်းဖို့သူဖို့၊ နွားတို့အတွက်တလှည့်ကျေးဇူးပြုကြနှင့် မမောနိုင်မပန်းနိုင်။ သို့တိုင် ဧရာဝတီကိုအပြစ်မမြင်အား။
ရေဦးပေါက်စတွင်လည်း အညာဆီကမျောလာခဲ့သော ထင်းတွေကိုအပြိုင်ဆည်ကြ၊ ရှင်ဥပဂုတ်ဖေါင်ပူဇော်မျှောကြနှင့် မြစ်ရိုးနေတို့၏ ဓလေ့ဘာသာများ။
မြစ်ရေကျသွားသည့်အခါမှာတာ့ နုံးတင်ခဲ့သည့်မြေမှာ ထွန်ကြယက်ကြနှင့် နွားငေါက်သံတွေ ကွင်းလုံးဝေတော့သည်။ သို့တွေးနေစဉ် ကိုယ့်ရင်သည် ကျင်ကနဲ နာကျင်သွားပြန်သည်၊ သည်ဧရာဝတီပေါ့၊ သူလေ .. သူ … “တစိမ်းဆန်သည့်ဧရာဝတီ” ဟု ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးခဲ့ဖူးသည့် ဝတ္ထုလေးက ရုတ်ချည်းပေါ်လာသည်။ ကိုယ့်တို့ညီမလေး “မတူး” ရဲ့အကြောင်း၊ ရေအလျှင်တွင် နစ်မွန်းဆုံးပါးသွားခဲ့သော ညီမလေး၊ ညီမလေးရေ၊ သို့နှယ် ကြေကွဲဖွယ်ကိုပေးခဲ့သော်ငြား ကိုယ်တို့ဧရာဝတီကို မစိမ်းနိုင်။ သူကျောပေါ်မှာစီးနင်း၍ ခရီးစုံဆန် အတန်တန်ပင်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်ကိုမျှော်နေခဲ့ဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ ကိုယ့်အဖေ ကုန်ကူးသွားခဲ့ဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ ကိုယ့်အစ်မတွေ ကိုယ့်နှမတွေ ဈေးသွားကြ ကျောင်းတက်ကြဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ တံငါလှေတွေ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ ရွာ့နွား ရွာ့ကျွဲတို့ရေသောက်ဆင်းခဲ့ဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ ရွာ့လုံမတို့အတွက် လုလင်တွေတွေးသီခဲ့ဖူးသည်။
သည်မြစ်ကမ်းမှာ …. …. …
ဂဏန်းချ၍ ကိုယ်ရေတွက်နေမိစဉ်၊ သင်္ဘောတစ်စင်း၏ တူ.. တူ.. ဟု ဥသြဆွဲသံကို ပဲ့တင်ကြားယောင်မိပြန်သည်။
မွန်းတည့်လုချိန်ဆို မန္တလေးနှင့်ပြည်ပြေးဆွဲနေသည့် ပြည်ကုတို့သင်္ဘော ဧရာပေါ်မှာ ပေါ်လာမြဲ။ ကျေးလက်နေတို့အတွက် အချိန်မှတ်စရာ နာရီတမျိုးပင်။ သင်္ဘောကြီးဟုခေါ်သည့် အညာဆန်ကြီးကိုလည်း ရက်ခြားဆန်တက်သွားတာကို တွေ့ရတတ်သည်။
ထိုသို့တွေ့နေကျ အဖြူရောင်သင်္ဘောများအပြင် အမဲရောင်သင်္ဘောကြီးများကိုလည်း မကြာခဏတွေ့ရတတ်သည်။ ရေနံတင်သင်္ဘောကြီး များနှင့် ပြောင် ၂၁၊ ကြံ ၁၈၊ စသည့်အမည်များနှင့် သောင်တူးသင်္ဘောကြီးများ။
တပေါင်းတန်ခူး ဧရာဝတီရေနည်းချိန်ဆိုလျှင် ထိုသောင်တူးသင်္ဘောကြီးတို့ ရောက်လာကြစမြဲ၊ ထွန်းနေသောသောင်များကို တူးဖြိုပေးကြ သည်။ ပြောင်းလွယ်သော ရေကြောင်းကို မစောင်းတိမ်းအောင် သောင်များကိုဖယ်ရှားပေးကြသည်။
ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်ကတည်းက စီမံထားခဲ့သောရေကြောင်းထိန်းသိမ်းမှုများပင်၊ နောင်ကိုယ်တို့အရွယ်ရောက်လာတော့ ထိုသင်္ဘော ကြီးများကို မတွေ့မြင်ရတော့ချေ။ တစတစသောင်တွေကျယ်ပြောလာခဲ့သည်ကိုသာ သတိထားမိသည်။ တဖက်သောင်ထွန်းလျှင် တဖက်ကမ်းပြိုမြဲနိယာမအတိုင်း ကမ်းနံဘေးရွာလေးတချို့ ကမ်းပြိုသည့်ထဲပါခဲ့ကြသည်။ ဟိုအရှေ့ဖက်ကမ်းမှာတော့ သဲသောင်ပြင်ကြီး တမျှော်တခေါ်။
ငါးမြာကဆေးဟုနာမည်ကြီးခဲ့သော ငါးမြာကြီးရွာဆိုလျှင် မြစ်နှင့်ဝေးစွာကျန်ခဲ့ပြီ။ မြစ်ကြောင်းသည် ထိန်းသူမဲ့ခဲ့ပြီ။ ကြံ့တို့ ပြောင် တို့ဆိုသည့်သင်္ဘောကြီးတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့်။ နောင်မှသိရသည်၊ အမှတ်မထင် ထိုသောင်တူးတပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့ ဖူးသော အဖိုးအိုတစ်ဦးနှင့်ဆုံမှ “သက်သက်လောင်စာဆီကုန်တယ်” ဆိုပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌကြီးက ဖျက်သိမ်းခိုင်း လိုက် သည်တဲ့။ နယ်ချဲ့ဆိုသူ၏ သိမ်းယူထားသောမြေပေါ်ထားသည့် အမြှော်အမြင်နှင့် မျိုးချစ်ဆိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အမြှော်အမြင်နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တတ်ခဲ့သည်။
ယခုလည်းလာပြန်ချေပြီ။ “ဆရာထက် တပည့်လက်စောင်းတုံး”ဟု ဆိုးရိုးပင်ပြောင်းရတော့မည့်ထင့်။ ဆိုးမွေဆက်ခံသူများ၏ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စွာ ကြွေးကြော်နေသံများ နားမဆံ့ကြားရသည်။ ရင်မဆံ့အောင်ခံစားရသည်။ သူရို့လက်ထက်မှာ တံတားကြီးက ဘယ်နှစ် စင်း၊ ရေကာတာကြီးကဘယ်နှစ်ခု စသည့်စသည့်ဂုဏ်ဖော်သံများ၊ ထိုအသံတို့ကိုသာ ထပ်တလဲလဲ ဂုဏ်ယူစွာကြွားဝါနေခဲ့သည်။ တံတား တိုင်နှင့်တိုက်မိ၍ တိမ်းမှောက်သွားသောသင်္ဘောများ၊ သေဆုံးသွားသောပြည်သူများ ရေလွှမ်း၍ ပျက်စီးသွားသော စိုက်ခင်းများစသည်ကိုမူ ဘယ်သောအခါမှ ပြည်သူတို့သိရမည်မဟုတ်ချေ။
ထိုစဉ်က ပြောခွင့်မသာခဲ့သည့် စကားလေးတွေကို ယခုပြောပြလိုက်ချင်သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်က အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခု….
ရေကြောင်းဌာနနှင့် လမ်းတံတားဌာနတို့၏ပြဿနာ၊ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ် တံတားတွေထိုးကာ လမ်းတွေတိုးချဲ့ဖောက်ဖို့အဆိုတင်သွင်းသောအခါ ရေကြောင်းဌာနက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်တဲ့။ “ယခုလို မလိုအပ်ဘဲတံတားတွေထိုးခြင်းသည် မြစ်ကြောင်းတိမ်ကော ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း၊ လူတွေကမော်တော်ကားကိုသာအသုံးများပြီး ရေကြောင်းကို အသုံးမပြုသောအခါ လှုပ်ခတ်မှုမရှိ၍အနည်ထိုင်လွယ်ကာ မြစ် ကြောင်းများတိမ်ကောလာတတ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ရေကြောင်းကိုသာ တွင်တွင်သုံးသင့်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ ခိုင်လုံသော ထိုအကြောင်းပြကြောင့် လမ်းတံတားဌာနက စီမံကိန်းကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်တဲ့။
ဒီအကြောင်းကိုရော သူတို့တစ်တွေသိမှသိခဲ့ပါလေစ။ သိလျှင်ကော တန်ဘိုးထားမှ ထားကြမှာပါစ။ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တို့ နေရာမဲ့ခဲ့သည်မှာ ကြာငြောင်းခဲ့ပြီမဟုတ်လား။
မျက်စိတဆုံးကြည့်သောနယ်ချဲ့နှင့် မျက်မွှေးတဆုံကြည့်သော မျိုးချစ်ဆိုသူတို့ကို ဘယ်သူကသူ့ပေါ်ပိုချစ်တယ်ဆိုတာ ဧရာဝတီအသိ ဆုံးဖြစ်ပေမည်။
တကယ်လို့ ဧရာဝတီရဲ့လှိုင်းကြက်ခွက်သံလေးတွေကိုသာ ဘာသာပြန်တတ်မည်ဆိုလျှင် “အချင်းတို့ အမြှော်အမြင်ရှိသောနယ်ချဲ့က ငါ့ အကျိုးရှိရာပြုလုပ်ခဲ့မှုတို့ကို သင်တို့ကပယ်ဖျက်ကြ၍ သူပယ်ဖျက်ခဲ့သော ငါအကျိုးမဲ့မှုကိုကား သင်တို့တစ်တွေ မသူတော်တို့နှင့်ပေါင်းကာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြုလုပ်နေကြလေသည်တကား”ဟု ငြီးတွားသံကို ကြားရမည်ဧကန်။
သို့နှယ်အတွေးစီးကြောင်းမှာမျောပါရင်း လက်ထဲကမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကလေးကို ငိုင်ကြည့်နေမိသည်။ ဆည်းဆာရိပ်ဟပ်ထင်နေသော ဧရာ ဝတီ။ ဒါ.. ဧရာဝတီရဲ့ဆည်းဆာလား၊ ဆည်းဆာဆိုတာ ဧရာဝတီရဲ့နေဝင်ချိန်လား။
အို …. မဟုတ်ဘူး …. မဟုတ်ဘူး …. ဒါ…. ဧရာဝတီရဲ့အရုဏ် …ဒါ..ဧရာဝတီရဲ့အရုဏ် …. ဒါ… ဧရာဝတီရဲ့ အရုဏ်…. ။
Posted by oothandar on September 10, 2011 in Kan Tun Thit, Variety Article